Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sevilla oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Sevilla) 27 Feb 2021. Barcelona ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sevilla oo ay ku booqatay Estadio R. Sanchez Pizjuan, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Barcelona.
Daqiiqadii 29-aad kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 xiddigooda Ousmane Dembele, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Lionel Messi.
86 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Lionel Messi ayaa ka dhigay 0-2 oo ay ku hoggaamineysay kooxda kubadda cagta Barcelona.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 0-2 ay Barcelona kaga soo adkaatay kooxda Sevilla oo ay ku booqatay Estadio R. Sanchez Pizjuan, Blaugrana ayaa haatan kala baxday booska labaad naadiga Real Madrid kaddib markii ay uruursatay 53 dhibcood.